आशा, बिस्वास र भरोसाको कहिल्यै ननिभ्ने दियो हो प्रेम::Leading News Portal From Nepal.
आशा, बिस्वास र भरोसाको कहिल्यै ननिभ्ने दियो हो प्रेम
जगतको आड/आधारशिला प्रेम ‘प्रणयु’ प्रती अपार श्रद्धा अर्पित गर्ने बिशेष दिन हो प्रेम दिवस । लैला मज्नु, रोमियो जुलियट, मुनामदनदेखि आज हामीसम्म आइपुग्दा प्रेम कसरी परिभाषित हुँदै आयो, कस्ता–कस्ता ब्यबहारिक व्याख्या बिश्लेषण हुँदै आयो, प्रेमको मुल्य र मान्यता कत्तिको मजबुत हुँदै आयो वा खस्किदै गइरहेको छ भन्ने कुरामा बिचार गर्ने हो कि ?
रोमियो जुलियट , लैला मज्नुको प्रेम भित्र बिशिष्ट अपार समर्पण देखिन्छ । मुनामदनको प्रेम पबित्रता, सहनशिलता, समझदारी, प्रतिवद्धता भक्तीको विशिष्ट नमुना लाग्छ । प्रेम ठ्याक्कै यस्तै हुनुपर्छ भन्ने कुनै परिभाषा त हुन्न सायद, तर पनि प्रेम जस्तो इश्वरिय स्वरुप को अबमुल्यन हुनुहुदैन भन्ने मात्र हो।
बर्तमान परिपेक्षमा कतिपय युवा पुस्तामाझ फुश्रो हाँसोको खिल्लिमा प्रेमको अस्तित्व उडेको देख्दा प्रेमको भाव हैन प्रेम भाव वाचक नामलाई अहंकार , संक्रिनताको कसिमा बाँधेर सुन्दर भविश्य नै दाउमा लगाएको सुन्दा प्रेमको अर्थ माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको हो कि जस्तो भान हुन्छ कता–कता । प्रेम त प्रेम नै हो , सधैं पुजनिय हुन्छ, बरु यसको दुरुपयोग गरेर अराजकताको उत्कर्षमा पुगेर वरदान स्वरुप पाएको जिन्दगी खेर नफालौँ।
महत्वकांक्षा र अपेक्षा भन्दा निकै माथि रहेको समर्पण र समझदारीको पुष्पाञ्जलीले सुसज्जित अर्चना जस्तो लाग्छ प्रेम। शाहस, उत्साह,प्रेरणा को स्रोत मात्र हैन आशा, विश्वास, भरोसाको कहिल्यै ननिभ्ने दियो जस्तो लाग्छ । साच्चै प्रेमले सकारात्मकताको विकास गराउने मात्र कहाँ हो र यसले त नकारात्मक भित्र पनि सकारात्मकताको खोजी गर्न प्रेरित र्छ । प्रेम प्रार्थना हो, प्रेम पुजनीय छ, प्रेम इश्वर हो ।
आज मात्र हैन सधैंभरी सबैको मुहार, मन हाँसी रहोस, कसैको आखा पिर, ब्यथाले नभिजुन, कसैको साथ नछुटोस्, हृदय नतोडियोस, प्रेमको अनन्त सागर बगि रहोस सदासर्वदा मंलमय सुभकामना ।